Midika inona ny ranomason'ny alika? | Alika Manerantany
Rentsika ny alikantsika “mitomany” rehefa mangataka sakafo amintsika izy, rehefa tsy te hijanona irery ao an-trano izy… ary amin'ny ankapobeny, rehefa te hisarika ny saina izy. Na izany aza, na dia mahavita miteraka ranomaso aza izy ireo dia tsy taratry ny fahatsapana toy ny alahelo na fanaintainana, fa kosa miaro ny maso na famantarana ny olana ara-pahasalamana.
Tsy midika izany fa tsy manana fihetseham-po ny alika, fa kosa amin'ny fomba samihafa no anehoany izany. Ampahafantaro anay inona no dikan'ny ranomason'ny alika?
1 Karazan-dranomaso alika
2 Antony fitomaniana alika
2.1 Ny aretina izay misy ifandraisany amin'ny lacrimation an'ny alika
2.1.1 Conjunctivitis amin'ny alika
2.1.2 Alergia amin'ny alika
3 Fomba entina manala tasy mandatsa-dranomaso amin'ny alika
4 Mitomany tomany ve ny alika?
5 Ny masoko dia mitomany ary marary izy
6 Mitomany ny masoko ary mangidihidy
Manavaka karazan-dranomaso telo ny mpahay siansa: basal (hosorana ary arovy ny kornea), reflex ianao (ateraky ny fandotoana, ny allergy, ny fahasosorana sns) ary pihetseham-po (Mifandray amin'ny fahatsapana toy ny tahotra, alahelo, fifaliana ...) izy ireo.
Ny alika dia tsy manana afa-tsy ny roa voalohany, izay tsy mitovy amin'ireo mampihetsi-po, dia tsy misy proteinina na hormonina mifandraika amin'ny adin-tsaina. Ny marina dia ny tena asan'ny ranomaso amin'ny alika dia ny mitazona ny masony ho mando foana, zavatra tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny maso tsara.
Amin'izany fomba izany dia manadio sy manosotra ary miaro ny rafitr'izy ireo amin'ny fomba voajanahary izy ireo, toy ny mitranga amin'ny zanak'olombelona. Etsy ankilany, ireo tomany ireo dia mety koa noho ny antony ivelany toy ny fandotoana na ny fifandraisan'ny zavatra simika sasany.
Raha miseho be loatra io triatra io dia mety hitaratra ny olana iray eo amin'ny voanjotoy ny rangotra, fivontosana na aretina. Raha izany dia tsy maintsy mandeha haingana any amin'ny mpitsabo biby isika mba hamaritana ny niandohan'ity ranomaso be ity. Ny fitsaboana amin'ireto tranga ireto dia matetika ary tena mandaitra.
Araka ny hitantsika, ny ranomason'ny alika dia tsy misy ifandraisany amin'ny fihetsem-pony. Mahatsiaro alahelo, fifaliana ary fanaintainana toy ny zanak'olombelona izy ireo, saingy ampitainy amin'ny alàlan'ny fitenin'ny vatany izany. Ny fanehoan-kevitr'izy ireo dia lehibe kokoa noho ny eritreretintsika matetika, ary na dia tsy mitomany tahaka ny ataontsika aza izy ireo, dia afaka mampiseho ny fihetseham-pony amin'ny fomba fijery fotsiny izy ireo.
Antony fitomaniana alika
Ny fiasan'ny ranomaso amin'ny alika dia tazomy ho mando izy ireo, satria ampahany tsara amin'ny fahasalaman'ny maso no miditra ao, dia azon'izy ireo atao ny mitazona ny masony madio ary miaraka amin'izay dia miaro ny firafitra voajanahary.
Io ihany no mitranga eo amin'ny mason'ny olombelona, ​​na dia betsaka aza ny triatravatra vokatry ny fahalotoan'ny tontolo iainana (setroka, fofona mahery, gazy), koa noho ny fifandraisany amin'ireo akora simika manelingelina.
Ankehitriny, raha lasa be dia be sy mitohy ny fisian'ny ranomaso dia mila mandinika kely kokoa ianao, satria mety voadona ny alika, manana olana amin'ny kornea, aretina na ratra. Ny zavatra atolotra tokony hatao alohan'ny famantarana fa misy zavatra tsy mety dia ny mitondra azy haingana any amin'ny vet.
Ny aretina izay misy ifandraisany amin'ny lacrimation an'ny alika
Conjunctivitis amin'ny alika
Ity aretina ity dia miseho noho ny olana manokana ary koa indraindray, izay dia avy amin'ny fahamainan'ny maso tafahoatra, avy amin'ireo mpiasan'ny fahasosorana misy eo amin'ny tontolo iainana na avy amin'ny tsy fahombiazan'ny maso sasany, indrindra ny hodi-maso.
Matetika koa izy io dia miseho rehefa asehon'ilay alika ny pathologies marefo, toy ny hépatite na distemper, amin'io lafiny io dia ilaina foana ny hevitry ny manam-pahaizana.
Rehefa misy sary mahazaka azy ao, azonao atao ny mahita ny fiantraikan'ny maso, satria manjary mirehitra sy mivadika mena ny volomasoHo fanampin'izay, hisy ny fisian'ny legañas izay hanasarotra ny fisokafan'ny biby fiompy ny masony aza.
Ny fambara hafa izay afaka miaraka amin'ity sary ity dia mikohaka sy mievina mitohy.
Rehefa misy aretina, ankoatry ny legañas be loatra sy ny lacrimation dia azo atao ny mijery ny tsiambaratelo misy loko mavo na maintso betsaka koa aho. Ny fahasosoran'ny molotry ny maso sy ny volomaso dia manondro aretina ihany koa.
Fomba entina manala tasy mandatsa-dranomaso amin'ny alika
Ireo teboka ireo dia mipoitra vokatry ny fitrandrahana ny volo hita eo ambanin'ny mason'ilay alika, izay miharihary kokoa amin'ireo karazana volom-borona fotsy ireo. Mba hisorohana na hanesorana azy ireo dia hamela anao toro-hevitra maromaro izahay:
Atombohy amin'ny fisorohana ny volo manodidina ny mason'ny alikanao tsy hanelingelina azyRaiso ny fepetra toy ny fanapahana azy ireo tsara na alaivo amin'ny alàlan'ny fehikibo vita amin'ny fingotra rehefa lava be izy ireo ary tsy tianao ny manapaka azy ireo.
Mandrosoa diovina tsara io faritra io, noho io asio rano mafana kely misy sira na vokatra manokana noho izany amin'ny alàlan'ny lamba madio. Ny tsiambaratelo dia ny fanaovanao izany farafahakeliny indroa isan'andro, mandra-pahatratraranao ny tanjona.
Andramo atao ity faritra ity mijanona ho maina araka izay tratraMba hanaovana izany dia tandremo ny fanadiovana ny ranomaso sy ny tasy amin'ny mason'ny biby fiompinao.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny manova ny PH ny ranomasin'ilay alika, ary manisy vinaingitra vinaingitra paoma amin'ny rano fisotro (kafe 1 sotro isaky ny rano 2 litatra). Izany dia mampihena ny fitrandrahana ny volo eo ambanin'ny maso sy ny fandotoany.
Tandremo ny sakafon'ny alikanao amin'ny fisorohana ny serealySatria tsy manome na inona na inona izy ireo, ny sakafo tsara kokoa manan-karena amin'ny proteinina izay avo lenta na sakafo voajanahary tantanan'ny mpitsabo biby.
Mitomany tomany ve ny alika?
Araka ny hitantsika hatreto, ny alika dia manao izany mahay miteraka tomany ary izany dia satria manana ny fantson-dranomaso mamela azy ireo izy ireo; na izany aza, ireo ranomaso ireo dia miaro ny firafitry ny bisikileta, izany no asany lehibe indrindra.
Zavatra iray hafa tena hafa dia ny fitarainan'ny alika izay fomba fanaon'izy ireo milaza fa manana fanaintainana, ahiahy, tahotra, fahasosorana izy ireo, sns., Saingy ny tomany alika dia tsy miteraka tomany toa ny olombelona Fa kosa, izy ireo dia mihetsika ho toy ny rafitra mamela azy ireo hanalefaka ny adin-tsaina sy hanambara ny zavatra ilainy, raha fintinina, fomba iray hafa ifandraisana amin'ireo havany olombelona.
Ao amin'ny alika dia fahatsapana tsotra fotsiny izy ireo mamaly ny filàna tena ilaina ao amin'izy ireo izy ireo, toy ny sakafo, orinasa, dia an-tongotra isan'andro, sns., izay ianaran'izy ireo koa hatramin'ny fahazazany mba hiara-hiasa amin'ny fikororohana, fa ny tranga eo am-pelatanana dia misy porofo fa marefo amin'ny zavatra fantany fa rehefa mitomany izy dia handray amin'ny alàlan'ny fiarovana rehetra avy amin'ny tompony, ny sainy, ny fitiavany, ny sakafo, ny orinasa ary zavatra maro hafa.
Ny masoko dia mitomany ary marary izy
Mitomany ny alika, mahazatra izany ary tomany Matetika izy ireo dia be dia be kokoa raha ny maso no voakasiky ny fisian'ny vovoka, loto, sombin-javatra ankoatry ny zavatra hafa, izay afaka mamokatra legañas koa ho anisan'ny fanadiovana.
Mitranga koa ny Legañas raha matory ny alika, satria manampy amin'ny fiarovana ny maso izy ireo. Ireo dia mety miovaova amin'ny tsy fitovizany sy ny lokony, izay milaza betsaka momba ny fihazonany ny mason'izy ireo madio, ary raha fotsy sy fotsy kokoa izy ireo.
Tsy tokony hanahirana antsika ireo legañas miloko maivana, fa rehefa mavo na maitso izy ireo dia mety voan'ny conjunctivitis na aretina mikraoba ny alika, alohan'io dia efa fantatrao fa tokony hihazakazaka any amin'ny mpitsabo ianao.
Mitomany ny masoko ary mangidihidy
Raha tsikaritrareo fa ny mason'ilay alika dia mitomany amin'ny fomba tsy mahazatra ary manenjika mafy izy, Toe-javatra izay mila ny sainao io, satria ohatra ny fidiran'ny vatan'ny vahiny amin'ny be dia be izay afaka mitondra ny rivotra, ary izany dia miraikitra amin'ny amboniny na mandry ao ambadiky ny hodi-maso.
Ity karazana hetsika ity dia mitaky ny fidiran'ny manam-pahaizana manokana, satria ny alika dia tsy hamela anao hikasika ny masonao akory, noho izany ilaina ny mandeha miaraka aminy haingana any amin'ny biraon'ny veterinera satria ny sombintsombiny sasany dia mety miteraka fahasimbana be eo amin'ny masony. .
Manantena izahay fa nanompo anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Midika inona ny ranomason'ny alika?
Haharitra hafiriana ny alika malaso?